Wasiirka Arimaha Dibabada oo kulan la yeeshay Safiirka Imaraadka u fadhiya Soomaaliya – Walaal24 Newss
February 2, 2018	Off	By walaal24
Wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa kulan kula yeeshay xarunta Safaaradda ee Magaalada Muqdisho safiirka dowladda Imaaraat ka carabta u fadhiya Soomaaliya Amb; Maxamed Axmed Cusmaan Al-xamaadi.
Labada masuul ayaa ka wada hadlay xiriirka qotoda dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraat ka iyo sidii loo sii xoojin lahaa calaaqaadka taariikhiga ah.
Danjire Al-xamaadi ayaa wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya u gudbiyay dhambaal salaan ah oo uu kaga siday dhiggiisa Dalka Imaaraat ka Cabdala Bin-Zayed Al-Nahyaan iyo wasiiru dowlaha Dalkaasi Dr; Anwar Bin Maxamed Qarqaash, iyagoo u rajeeyay inuu ilaahay ku guuleeyo howlaha horyaalla.
Wasiir Cawad ayaa dhankiisa dowladda Imaaraat ka kaga mahad celiyay dedaallada joogtada ah ee ay ku taageereyso Soomaaliya, isagoo aad u bogaadiyay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada Dowladood.
Sidoo kale wasiirka ayaa dowladda Imaaraat ka ku ammaanay mashaariicda horumarineed ee dhan walba leh ee ay ka waddo Dalka Soomaaliya, gaar ahaan taageerada ay siiso wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya.
Wasaaradda Ganacsiga XFS iyo Rugta Ganacsatada iyo Warshadaha ee Soomaaliya oo Heshiis kala saxiixday